विश्व सुन्दरीको ‘ताज’ शृंखला खतिवडाले नै पहिरिने सम्भावना प्रबल ! बाहिरियो यस्तो भिडियो मन थामेर हेरौँ सेयर गरौँ - Kendra Khabar
विश्व सुन्दरीको ‘ताज’ शृंखला खतिवडाले नै पहिरिने सम्भावना प्रबल ! बाहिरियो यस्तो भिडियो मन थामेर हेरौँ सेयर गरौँ
२०७५, १८ मंसिर मंगलवार ११:२१
चीनमा जारी विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सारा नेपालीका लागि अत्यन्तै खुशीको खबर आएको छ । हेड टु हेडमा सिंगापुरसँग पराजित भएपनि अन्ततः श्रृङखला खतिवडाले मल्टिमिडिया अवार्डको ताज पहिरिएर फाईनल चलणमा प्रवेश गरेकी छिन्। हेड टु हेड च्यालेन्ज बाट हार बेहोरेकी शृङ्खलालाई फाईनलमा पुग्न मल्टिमिडिया अवार्ड ठूलो माध्यम बनेको थियो । जुन आज पूरा भएको छ । मिस वर्ल्डको अफिसियल फेसबुक पेजमा श्रृङखलाले मल्टिमिडिया अवार्ड जितेको कुरा सार्बजनिक भएको छ ।
मिस वर्ल्डको अन्तिम प्रतिपर्धा डिसेम्बर ८ मा हुँदैछ । यो भएसँगैं अब नेपापले विश्व सुन्दरीको ताज पाउँन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दैं गएको छ । अब हाम्रो साथ खतिवडालाई चाहिने भएपनि अन्तिम विजेता बन्नको लागि उनैं खतिवडाले राम्रो मेहनत गर्नुपर्छ । उनी भित्र रहेको कला र कौंशलतालाई आज संसारले प्रशंसा गरिरहेको छ । यसैं बिचमा यदी उनले निर्णायक मण्डलहरुको मन जित्न सकिन भने यो वर्षको विश्व सुन्दरी धेरैं वर्ष पछि नेपाललको पोल्टामा पर्ने देखिएको छ
यहिँ भिडियो हो जसले संसारलाई रुवाउयो शृंखलालाई ब्युटी पर्पोज जितायो, मन थामेर हेरौँ सेयर गरौँ हेर्नुहोस भिडियो
यहिँ भिडियो हो जसले संसारलाई रुवाउयो शृंखलालाई ब्युटी पर्पोज जितायो, मन थामेर हेरौँ सेयर गरौँ